Jubbaland oo ku soo biirtay Go,doomintii lagu haayey Galmudug. – Kismaayo24 News Agency
by admin 13th May 2019 040
Wakiilada beesha Caalamka ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa in cadaadis saaraan Madaxda maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo lagu eedeenayo in ay diidan yihiin in doorasho ka dhacdo deegaanadooda ayna doonayaan wax isdaba marsi iyo mudo
Dhageyso: War murtiyeed kasoo baxay Shirkii Sadex geesoodka ahaa.
Dhageyso:Wasiir Goodax bare oo markale Ardey Soomaaliyeed ku tilmaamay kuwa aan arday aheyn.
Maxaadan Ogeyn oo mudo 100 Sano ka dib uu ku dhawaaqay Madaxweynaha Mareykanka Obama???
Tifaftiraha K24 4th August 2016 4th August 2016
Daawo Roobab si weyn logu diirsaday oo ka da,ay Magaalada Cabudwaaq.
TOP NEWS: Puntland oo Sheegatay in ay dishay Shabaab Ka baxsaday Togga Suuj oo Maalmahan lagu dagaalamayay